पहिलो पल्ट नेपालमै बन्यो उत्कृष्ट बाईक, ७० रुपैंयाको चार्जले २०० कि.मि. दौडने (भिडियो सहित) – Nepali in Australia
March 12, 2021 autherLeaveaComment on पहिलो पल्ट नेपालमै बन्यो उत्कृष्ट बाईक, ७० रुपैंयाको चार्जले २०० कि.मि. दौडने (भिडियो सहित)
यो स्कुटरमा नयाँ ग्लोबल डिजाइन भाषा समावेश हुनुका साथै एकल सिलिन्डर,४–स्ट्रोक, एयर–कूल्ड,३ भल्भ फीउल ईन्जेक्शन,कम कार्वन इमिसन ईन्जिन टेक्नोलोजी लगाइएको छ । जसले ७१०० आरपीएममा ११ पीएसको पीक पावर उत्पादन गर्नुका साथै उत्तम सवारी अनुभव र उच्च स्तरको आराम प्रदान गर्न ठूलो, लामो, आरामदायी र एर्गोनोमिक सीटहरू रचना गरेको कम्पनीले जनाएको छ । स्कूटर १२ भोल्ट, ५.० एएच. एमएफ ब्याट्रीको साथ र ७ लिटर इन्धन क्षमताको साथ आने पनि बताइएको छ । Source:etajakhabar